mini ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > mini ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
mini ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အဖွင့်အပိတ် / ပြောင်းလဲပစ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.AOX ရှိပါတယ် 23 နှစ်ပေါင်း ၏ စုပုံခြင်း တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု တွင်dustry.Accordတွင်g သို့ အဆိုပါ ကွဲပြားခြားနားသော တွင်quiey ၏ အဆိုပါ စျေးကွက်, ကျွန်တော်တို့ ရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တစ်ဦး စီးရီး ၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r. နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကောင်းသော reputတစ်ဦးtion ဖြစ် gတစ်ဦးတွင်ed အားဖြင့် အဆိုပါ reliတစ်ဦးbility နှင့် stတစ်ဦးbility perဘို့mတစ်ဦးnce တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ vတစ်ဦးlve အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု.
AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက် 2. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးမူလီလျှပ်စစ် actuator turn: ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းမူလီဆုံးရှုံးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါမူလီ waws ။
3. လွယ်ကူလျှပ်စစ် actuator turn AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက် cams set: အီလက်ထရောနစ်န့်သတ်ချက် switch ကို cam.The အနေအထားကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူး tool ကိုမပါဘဲတိကျစွာနှင့်အဆင်ပြေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဒီဘာဂင်မြန်ပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator turn လျှပ်စစ် cam ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းသို့လေး cams ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်လိပ်ပြာနွေဦးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ အထက်ပိုင်းတစ်သော့ခတ်ခွံမာသီးတွေနဲ့နှိပ်သည်တစ်ဦးဝင်ပေါက် potentiometer အသုံးပြုသည်။
AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုစိတျအပိုငျးအဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting လျှပ်စစ် actuator turn သောက်ရေ, အိမ်တွင်းကိုရေကဲ့သို့, မိလ္လာကုသမှုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု system.It ကျယ်ပြန့်သောရေကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်, ပါဝါဘူတာရုံ, သံနှင့်သံမဏိ, ရေနံ, ဓာတု, ရေနံပိုက်လိုင်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ကုသ, Desalination, စွန့်ပစ်ရေ, မိလ္လာကုသမှု။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေအတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် , ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုစိတျအပိုငျးမြား၏နမူနာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အသင်သည်မည်သည့်လျှော့စျေးပေးပါသလား
hot Tags:: mini ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်